गोरो हुन क्रीमको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् यसका असर
२०७५ श्रावण २५ शुक्रबार ०५:५०:००
बीबीसी । क्रीम लगाउनु गलत होइन तर कुन उदेश्यका लागि क्रीम लगाइँदैछ भन्ने कुरा जान्न भने जरुरी छ । त्यस्तै शरीरको कुन भागमा क्रिम लगाइँदै छ, क्रीममा के–के कुराको मिश्रण गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी हुन आवश्यक छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यदि तपाईंले यि कुराहरुलाई ध्यान दिनुभएन भने क्रीमको प्रयोगबाट गम्भीर ‘साइड–इफेक्ट’ हुन सक्छन् । क्रीमहरु बजारमा बिक्रीका लागि आउनु पूर्व केही महत्वपूर्ण जाँचहरु गरिनुपर्ने भए पनि प्रायः जसो क्रीमहरु बिना जाँच पास गरेरै उपभोक्तासम्म पुर्याइन्छ ।
यस्ता क्रीमहरुमा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने पदार्थको मिसावट हुन सक्छ । त्यस्ता क्रीममा आवश्यकताभन्दा बढी मिसावट गरिएको भए प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चारमा तीन महिलाहरु डाक्टरको सल्लाह बिना नै ब्लीचको प्रयोग गर्दछन् । ब्रिटेनको नेशलन हेल्थ सर्भिसले महिलाहरुले अनुहारको दाग लुकाउन र सुन्दरता बढाउनका लागि गोरो बनाउने क्रीम प्रयोग गर्ने गरेको जनाएको छ ।
फेयरनेस क्रीमले कसरी काम गर्छ ?
गोरो बनाउने क्रीमले हाम्रो शरीरमा रहेको ‘मेलेनिन’ मा असर गर्दछ । हाम्रो त्वचाको रंग ‘मेलेनिन’ बाट तय हुन्छ र यि फेयरनेस क्रीमहरुले ती ‘मेलेनिन’ लाई कम गरिदिन्छन् । क्रीममा दुई प्रकारका ब्लीचिङ एजेन्ट हुन्छन्– हाइड्रोक्विनोन अथवा कर्टिकोस्टेराइड्स । त्वचा विशेषज्ञहरुका अनुसार क्रीममा हाइड्रोक्विनोनको स्तर ४ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्दछ ।
एक त्वचा विशेषज्ञले छाला चिलाउने समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिलाई कर्टिकोस्टेराइड्स अथवा टपिकल स्टेराइड्स प्रयोग गर्ने सल्लाह दिइने गरेको बताएका छन् । तर धेरै जसो मानिसहरु छालाको कुनै समस्या नभएपनि यसको प्रयोग गर्दै आएका छन् । छालामा समस्या भएका व्यक्तिलाई डाक्टरको सल्लाहमा टपिकल स्टेराइड्स प्रयोगका लागि दिइने गरेको उनको भनाई छ ।
क्रीम कहाँ र कति लगाउने ?
डाक्टरहरुका अनुसार हाइड्रोक्विनोन भएको क्रीम दिनमा दुई पटकभन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन । यो क्रीम हात र खुट्टामा मात्रै लगाउनुपर्दछ । हाइड्रोक्विनोन भएको क्रीम अनुहारमा नलगाउन डाक्टरहरु सल्लाह दिन्छन् । यस्तै आठदेखि १२ हप्ताभन्दा बढी पनि यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
तर केही मानिसहरु यस्ता क्रीमहरुको प्रयोग डाक्टरको सल्लाह बिना नै लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । ती मानिसहरु यि क्रीमलाई अनुहार, आँखा र आसपासको भागमा पनि लगाउने गर्दछन् । जसको प्रयोगले उनीहरुको छालामा जलन हुने समस्या देखा पर्न सक्छ ।